PressReader - Isolezwe: 2018-04-13 - I-DA iphoxwe wuDe Lille ngokuhambela owe-EFF
I-DA iphoxwe wuDe Lille ngokuhambela owe-EFF
Isolezwe - 2018-04-13 - IZINDABA - SIVIWE FEKETHA noMARY-JANE MPHATHELE
UKUNGABONI ngasolinye phakathi kweDA neMeya yaseCape Town, uNkk Patricia de Lille sekuthathe elinye igxathu njengoba leli qembu likhala ngokuthi lihlazekile ngesenzo sikaNkk De Lille sokuhambela umcimbi obewuhlelwe yi-EFF sokukhumbula uMama Wesizwe uNkk Winnie Madikizela-Mandela ngaphandle kokwazisa leli qembu.
NgoLwesithathu uDe Lille osamisiwe ukuthi azihlanganisi nezinto ezithinta ipolitiki kuleli qembu, kuzoqhubeka icala lakhe lokuqondiswa ubugwegwe. UNkk De Lillie uthuse abantu abaningi eqhamuka kulo mcimbi obuse Brandfort eFree State.
Uncome uNkk Madikizela-Mandela ngezimfundiso zakhe kuyena zokumela iqiniso, kulabo abasuke bephethe.
I-DA seyicele uNkk De Lille ukuthi achaze ngezizathu ezenze wahambela umcimbi we-EFF ngaphandle kokwazisa ubuholi baleli qembu.
Okhulumela i-DA kuzwelonke uNkk uRefiloe Ntsekhe uthe iqembu belingeke limenqabele uNkk De Lille ukube ucelile ukuhambela umcimbi we-EFF.
UNtsekhe ukuqinisekisile ukuthi njengeqembu balinde impendulo kuDe Lille ngesenzo sakhe.
Izolo ubengatholakali ocingweni kodwa ubonakale ebhala ezinkundleni zokuxhumana evikela isenzo sakhe sokuya kulo mcimbi.
“Neke ngikwazi ukwenza ukuhambela lo mcimbi kube yinto eseceleni engathi bekuwukuya kwi-EFF, okubalulekile ukuthi bengiyohlonipha uMama uWinnie, ungumuntu ebengimhlonipha kakhulu futhi engumngani futhi ngimthatha njengo sisi wami,” kusho uDe Lille.
Okhulumela i-EFF kuzwelonke uDkt Mbuyiseni Ndlozi ungenelelile, wathi bekusobala ukuthi uNkk De Lillie uzohambela lo mcimbi wokukhumbula uMama uWinnie.
“UMama uPatricia de Lille ubexhumene kakhulu noMama uWinnie Mandela futhi ungomunye wabantu besifazane abasungula amaqembu epolitiki baphinde bawahola, une rekhodi elihle lo mzabalazo.